(၂)ယောက်စာ ဒူးရင်းသီးမလိုင်(၁)ပွဲကို (၂၀၀၀)ကျပ်တည်းနဲ့ရနိုင်မယ့် ဒူးရင်းသီးဆိုင်လေး – FoodiesNavi
(၂)ယောက်စာ ဒူးရင်းသီးမလိုင်(၁)ပွဲကို (၂၀၀၀)ကျပ်တည်းနဲ့ရနိုင်မယ့် ဒူးရင်းသီးဆိုင်လေး
By yin sandi On May 25, 2018 0
ဒူးရင်းသီးရာသီချိန်ခါဆိုတော့ အနံ့ပြင်းလှတဲ့ဒူးရင်းသီးအနံ့က လှိုင်လှိုင်သင်းပြီးအစွမ်းပြလို့လာပါပြီ ။ ကိုယ်တိုင်ဝယ်မစားဖြစ်ရင်တောင်မှ ပတ်ဝန်းကျင်ကဝယ်ယူလာသူတွေကတဆင့် ဒူးရင်းသီးအနံ့လေးတွေရတတ်သလို ဒူးရင်းသီးဆိုင်ရှေ့ကနေ ဖြတ်သွားမိရင်တောင် နှာခေါင်းဖျားလေးထဲအနံ့စွဲသွားအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်လွန်းတော့ ဒူးရင်းသီးကြိုက်လွန်းတဲ့ အက်မင်ဆို အနံ့ရတိုင်းမရိုးမရွတွေဖြစ်နေရောပဲ ? ဒီနှစ်ဒူးရင်းသီးပေါ်ချိန်လေးမှာတော့ ထူးထူးခြားခြားဒူးရင်းသီးမလိုင်အကြောင်း မကြာခဏတွေ့နေရတာနဲ့ အရမ်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ ဒူးရင်းသီးမလိုင်ဆိုင်လေးအကြောင်း အစားတစ်လိုင်းတို့ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဒီဆိုင်လေးက မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မြောက်ဥက္ကလာအဝိုင်းအကျော် ၊ နွယ်နီ(၈)လမ်းထဲမှာဆိုတော့ မြို့ထဲနဲ့တော့နည်းနည်းလှမ်းတယ် ဒါပေမယ့်အစားအသောက်ကောင်းပြီဆို ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသပဲဖြစ်ဖြစ် သွားစားလိုတဲ့အစားတစ်လိုင်းအတွက်ကတော့ လာချင်ရင်အနီးလေးပါနော် ?ဒူးရင်းသီးရဲ့မွှေးအီဆိမ့်ထွက်နေတဲ့အရသာနဲ့ မလိုင်ရဲ့ခပ်ဆိမ့်ဆိမ့်အရသာလေးတွေ ရောစပ်လိုက်တော့ ချိုချိုအီအီလေးနဲ့ ဆိမ့်ဆိမ့်မွှေးမွှေးလေး တအားစားလို့ကောင်းတယ်။ တစ်ပွဲကို(၂၀၀၀)ကျပ်တည်းရယ်။ တစ်ပွဲဆို(၂)ယောက်စားလို့ရတယ်။
ဒီဆိုင်လေးမှာတော့ ဒူးရင်းသီးတွေကို ယိုးဒယားသီးနဲ့ထားတယ်သီးတွေရနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်း(၃၀၀၀)ကျပ်ကနေ (၇၀၀၀)ကျပ်ထိဈေးအစားစားရှိတယ်။ အသားထူပြီးအမွှာများတော့ တော်တော်လေးလူကြိုက်များတယ်။ တစ်ခုပဲ ? ရောင်းတဲ့အဒေါ်ကြီးက အပေါက်ဆိုးတယ်ကွယ် ? နာမည်ရနေတဲ့အချိန် ချိုချိုသာသာလေးပြောပြီး ဈေးကွက်ကိုထိန်းထားသင့်တယ်လို့ အက်မင်ကတော့ထင်တယ်။ ကျန်တာအားလုံးကတော့ ရှယ်တန်ရှယ်ကောင်းပဲ ?
Image Soure: Delicious Foods and Visited Places
ဂျင်းမဟုတ်ဘဲ ရှယ်ကောင်းရှယ်တန်တဲ့ (၉၇၀၀)ကျပ်တန် ” Jin ” ဟော့ပေါ့ဘူဖေး
ဘယ်လောက်စားစားအားမရတဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးကို အိမ်မှာနေရင်းဗန်းလိုက်ကြီးမှာစားကြမယ်